magnetic induction kudziyisa sisitimu yebrazing, annealing, kusungunuka, forging
musha / high frequency induction heating / magnetic induction kupisa system
Categories: high frequency induction heating, induction brazing machine, Induction Kurwisa Machine, Induction Power Supply, Pakati Pakati Pose Inopisa Mhepo Tags: high frequency induction heater, IGBT induction heat system, induction brazing heater, Induction Brazing Machine, induction yekugadzira muchina, induction heater mugadziri, induction heating device, Induction Heating equipment, Induction Heating Machine, induction heat system, induction yakanyungudutsa muchina, magnetic induction heater, zvemagetsi induction kupisa system
IGBT magnetic induction kupisa system
chimiro chakasiyana uye saizi induction heat coil inogona kuchinjwa zviri nyore kupisa zvikamu zvakasiyana.
1.Heating (inopisa nokuchengetedza, inopisa kukodzera uye simbi)
Induction Kupisa kwekuchengetedza inotarisira kugadzira zvidimbu zveimwe tembiricha (zvinhu zvakasiyana zvinoda tembiricha dzakasiyana) kuita mamwe maumbirwo kuburikidza nekugadzira muchina nerubatsiro rwepunch, muchina wekutsikisa kana zvimwe zvishandiso, zvezviitiko, kupisa kupisa kwewachi kesi, wachi flan, mubato, chakuvhuvhu zvishongedzo, kicheni netafura ware, art ware, yakajairwa chikamu, fastener, yakagadzirirwa michina chikamu, yendarira kukiya, rivet, simbi pini nepini.
Kupisa kwakakodzera kunoreva kubatana kwesimbi dzakasiyana kana simbi ine nonmetals kuburikidza nekupisa kunoenderana nesisitimu yekuwedzera kupisa kana kupisa kupisa, kwezviitiko, kwakaputirwa kutenderera kwemhangura musimboti wecomputer radiator ine aruminiyamu pepa uye mutauri webhu, mukomboni wesimbi nepurasitiki chubhu, kuiswa chisimbiso kwealuminium pepi (zino peta peel), mota rotor uye kuiswa chisimbiso kwetubular yemagetsi kupisa element.
Kunyungudika kunonyanya kuitisa kuti simbi inyunguduke nekushandisa tembiricha yakakwira, iyo inonyanya kushanda mukunyungudika kwesimbi, simbi, mhangura, aluminium, zinc pamwe nesimbi dzakasiyana siyana.
2.Heat Kurapa (pamusoro kudzima)
Cima zvigadzirwa zvakasiyana siyana uye maturusi, senge pliri, chipanera, sando, demo, maturusi ekumisura uye shear (bindu rezvemichero).
Pedza zvimisikidzo zvakasiyana zvemotokari uye zvemudhudhudhu, senge crankshaft, yekubatanidza tsvimbo, pisitoni pini, cheni vhiri, aruminiyamu vhiri, vharafu, dombo ruoko shaft, semi dhiraivha shaft, diki shaft uye forogo.
Zima zvishandiso zvemuchina, senge lathe dhizaini uye gwara rezvitima.
Cima zvikamu zvakasiyana-siyana zvesimbi nesimbi, senge shaft, giya (cheni vhiri), cam, chuck uye kiramba etc.
Zima zvigadzirwa zvehardware, senge diki-saizi muforoma, chishongedzo choumba uye gomba remukati meforoma.
3.Welding (braze welding, sirivha soldering uye brazing)
Welding yeakasiyana-siyana ekucheka maturusi maturusi, akadai sedhaimani chishandiso, chishandiso chishandiso, yekuboora chishandiso, alloy saw blade, hard alloy cutter, milling cutter, reamer, kuronga chishandiso uye yakasimba centre bit.
Welding yeakasiyana michina yemagetsi gadget: Sirivheri soldering uye kuburitsa kusungurudza yesimbi yemhando dzakasiyana kana dzakasiyana dzakasiyana, senge Hardware chimbuzi uye zvigadzirwa zvekicheni, firiji kukodzera kukodzera, kushongedzwa kwemwenje kukodzera, chaiyo mold mold, Hardware mubato, eggbeater, alloy simbi nesimbi, simbi nemhangura pamwe nendarira nemhangura.
Pombi yevhu yepasi pekutsira inonyanya kushandiswa kune yekumhanyisa braze yedenderedzwa, mativi pamwe nezvimwe zvisina kujairika bani muhari pasi. Izvo zvinoshandawo kune yakajeka braze kutenderera kweimwe simbi.
Welding yekupisa disc yemagetsi anopisa-emvura ketera kazhinji inoreva iyo yekumhanyisa braze yesimbi isina simbi flat base, aluminium sheet uye tubular yemagetsi kudziyisa zvinhu zvemhando dzakasiyana.
3.Annealing (tempering uye modulation)
Kuwedzeredzwa kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvisina simbi, senge isina tsvina simbi, yakashongedzwa uye yakaburitswa kani, yakamoneredzwa yakapetwa kumucheto, yakanyura singi, isina simbi chubhu, tafura uye mukombe.
Kuwedzeredzwa kwezvimwe zvidimbu zvakasiyana-siyana zvesimbi, zvakaita segorofu bhora musoro, cue, ndarira kukiya, Hardware mhangura inokodzera, kicheni banga rekubata, blade, aluminium pani, aluminium pail, aluminium radiator uye zvakasiyana zvigadzirwa zvealuminium.
Kakawanda kutendeuka electromagnetic induction heat kana kupisa induction kwepfupi inzira yekupisa simbi zvinhu nekushandura magetsi kuwanda magetsi mune iyo yemhando yakatarwa zvichienderana nesimba remagetsi emagetsi induction. Inonyanya kushanda kune simbi inopisa inoshanda, kupisa kupisa, kupisa uye kusungunuka. Mhando iyi yekudziya hunyanzvi inoshandawo pakurongedza maindasitiri (senge kuiswa chisimbiso kwealuminium foil inoshandiswa mune zvemishonga uye chikafu indasitiri), semiconductor zvinhu (senge yakaburitswa monocrystalline silicon uye inopisa kupisa simbi zvikamu zvemota girazi).
Yekutanga ye induction kudziyisa system inosanganisira induction coil, AC sosi sosi uye zvidimbu zvebasa. Induction coil inogona kugadzirwa kuita akasiyana maumbirwo pazvinhu zvakasiyana zvinodziya. Iyo coil yakabatana neiyo sosi sosi inopa ichichinjika yazvino yekhoyili. Iyo yekuchinjanisa yazvino ine iyo coil inogona kugadzira inochinjika magineti shamba ichipfuura nepakati pebasa zvidimbu kuti ibudise eddy kuyerera sekudikanwa nekupisa.
Makomborero e manetic induction kudziyisa system
Kurumidza kupisa: iyo shoma chiyero chekudziya ishoma pane 1 sekondi (mwero wekudziya unowanikwa wekugadzirisa uye kutonga).
Kupararira kwakawanda kwekudziya: inogona kushandiswa kupisa dzakasiyana simbi zvikamu (kutsiva inobviswa induction coil sekusiyana kwakasiyana mashandiro ekushandura).
Easy installation: inogona kushandiswa kana ichinge yakabatana nesimba sosi, induction coil pamwe nenyere yekupa mvura uye pombi inomuka; idiki muhukuru uye nechiyero pakurema.
Easy operation: iwe unogona kudzidza kuishandisa mukati memaminetsi akati wandei.
Kukurumidza kutanga-up: inogona kutanga kuita opisa mashandiro pane mamiriro ekuti mvura nemagetsi zviripo.
Low power consumption: Kana ichienzaniswa neyakajairwa vhorumu chubhu yakakwira frequency ma equipments, inogona kuchengetedza simba neinenge 70%. Iyo diki saizi yeichi chikamu chebasa ndechekuti, iyo yepasi simba rekushandisa ingave iri.
Kubudirira kwepamusoro:ine maficha akadai seyunifomu kudziyisa (zvinoshanda kugadzirisa kupatsanurwa kweiyo induction coil kuve nechokwadi chakakodzera tembiricha sezvinodikanwa nechimwe nechimwe chikamu chebasa chidimbu), kudziya nekukasira uye kushomeka kune oxic horizon, uye inogona kuchengetedza chero tsvina mushure mekuwedzera.
Nzwisisika kudzivirirwa:ine mabasa akadai sekudzvinyirirwa, kuwedzerwa-kwazvino, kupisa uye kushomeka kwemvura zvinoratidza alarm pamwe nekuzvidzora otomatiki nekudzivirira.
Tembiricha inodzora: zvinoshanda kudzora tembiricha yekudziisa basa zvidimbu sekuenderana nenguva yakatarwa yekupisa, uye nekudaro kudzora kupisa kwekupisa pane imwe yehunyanzvi poindi.
Yakakwana yakazara mutoro dhizaini: inogona kushanda ichienderera kwemaawa makumi maviri nemana.
Simba diki uye huremu hwakareruka: ine huremu hwemakumi akati wandei emakirogiramu, ayo, iyo shoma nzvimbo nzvimbo inogona kunyatso chengetedza nzvimbo yemusangano.
Kubviswa kwepamusoro voltage: inoda hapana nhanho-kumusoro shanduri iyo inogona kuburitsa angangoita zviuru gumi emagetsi, uye nekudaro inogona kuve nechokwadi chekuchengetedza kwakanyanya.